WAXAAN ISKU DIYAARINEYNAA SARIIRAHA SANADKA SOO SOCDA: MAXAA IYO MEESHA LAGU BEERO? - WARARKA
Mid ka mid ah welwelka ugu weyn ee beerta xilliga Dayrta waa baahida loo qabo qorshaynta waxa dhici doona sanadka soo socda iyo halka uu ku kori doono.
Laga soo bilaabo sariirta loogu talagalay qajaarka, iyo taas - waayo, kaabajka, waxay ku xirnaan doontaa, tusaale ahaan, bacriminta dayrta ama jiilaalka jiilaalka ee toonta iyo basasha.
Aan eegno sida si sax ah uga fekereyso wareegga dalagga ee xajmiga.
Dad badan ayaa ogyihiin in monocultures beerashada hal meel aan lagu talin. Waxaa la rumaysan yahay in nafaqooyinka isku midka ah laga saaro ciidda, iyo sababta oo ah la'aanta ay jiri doonaan hoos u dhac ah ee dhalidda for this monoculture.
Laakiin tani maaha waxa ugu muhiimsan, dheelitirnaanta nafaqada waxaa lagu dhameeyaa qaab fudud - adoo sameynaaya Bacriminta lagama maarmaanka ah. Muhiimad ahaan, cayayaanka iyo jirrooyinka badankood ee dhaqankan ayaa ku dhex jira xaafaddan.. Waxay awoodaan inay cirib tiraan dhirta.
Haddii aad isku dhafato isku dhafan dhir kala duwan, markaas sariirahaagu waxay ku duuli doonaan cayayaanka. Cayayaanka kasta wuxuu udhaqaaqaa urta dhirta. Haddii qiiqa dibedda lagu daro urka hooyada, markaa cayayaanku ma dhigi doono ukun.
Waxaa jira nuuc kale. Xididdada dhirta oo idil waxay ka soo baxaan mykototoxyada (walxaha sunta ah ee microdoses) si ay u ilaaliyaan una calaamadeeyaan xuduudahooda. Haddii mid ka mid ah dhaqanka la koriyo waqti dheer meel hal meel, ka dibna ciidda waxaa jiri doona raasamaal ah oo dheeraad ah, kuwaas oo bilaabi doona in la joojiyo dhaqanka this.
Sababtan awgeed, muhiim maaha in la beero dhirta isla 2 ilaa 3 jeer oo isku xigta hal meel.
Si sax ah u beddesho meesha dhirta, abaabulo dalagga miraha, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado dhirta ay awood u leeyihiin in ay wada koraan, iyo kuwa horay u ahaa kuwa ku habboon cidda.
Abaabulka dalagyada beeraha meel yar
Marka hore, qajaar waa la koray, taas oo ay lagama maarmaan tahay in lagu daro arimaha organic. Waxaa lagu shaabadeeyn karaa dabocase guga hore.
Ka dib isaga, sanadka soo socda waxaad ku kori kartaa baradho hore ama mid ka mid ah dalagyada soo socda: cariishada, parsnip, dhir.
Sannadka 3aad, kaabajka waxaa lagu kori karaa sariirta, laakiin waa inaad marka hore ku darsatid organics, oo ka soo horjeeda keel, amooniyam-kalsiyam. Marka hore, waxaan ku dhajino kaabajka by beerashada isbinaajka, ka dibna beero qoorta.
Markaas dabocase waa in line, taas oo liming ee ciidda waa lagama maarmaan. Guga hore, xididdo waxaa lagu shaabadeeyn karaa salad.
Kadibna sariirta waxay koraan basasha basasha, laakiin marka hore waxay keenaan arrimo dabiici ah. Basasha ayaa is dul saarey biyo-qabad.
Halka isaga ka baxa karootada, beeritaanka kaas oo aan is dulqaadan.
Sannadka cusub, waxaad u baahan tahay inaad sameysid jalcini organic iyo dhir. Ka dib iyaga, waxaad ku kori kartaa digirta ama digir, iyo bartamihii July si ay u abuuraan radishes on gees ah.
Sannadka soo socda, sariiraha waa in ay ka cararaan oo ay beeraan mid ka mid ah dalagyada soo socda: gawaarida, radishes ama bagalka.
Markaas dabiici ah ayaa lagu dabaqay iyo basbaaska waxaa lagu beeray hoos cover of filimka.
Garlic ayaa soo gashay khadka ugu dambeeya. Kadibna qajaarku mar kale ayaa dib loo soo celiyaa, waxaana loo soo gaabiyaa organics.
Safkaasi wuxuu u muuqan karaa mid dheer, laakiin waxa loo qaybin karaa 2 ama 3 qaybood, ka dibna wuxuu ku sii socdaa dhaqanka kasta, iyada oo aan loo eegin midba midka kale.
Badanaa, qajaarka iyo yaanyada waxaa lagu koray koriyo. Waa inay noqotaa sannadkiiba hal mar oo ka mid ah tamaandhada qajaarka, iyo basbaas si fiican u koraan yaanyada.
La qabsashada dalagga
Goobaha yaryar way adagtahay in la abaabulo dalagga dalagga. Laga soo bilaabo booskan waxaa jira 2 meelood:
Sameynta wareeg ah ciidda.
Soo saar beeritaanka isku dhafan isla sariirta isku midka ah.
U-dhoofinta dhirta waxaa go'aamiya tilmaamayaasha qaar.:
By caado: ballaca iyo dhererka qaybta caanaha, iyo shuruudaha iftiinka. Dhirta tallaalka waa in aan la shidanin, haddii ay yihiin qorax-jecel yahay. Dalagyada hoos-u-dhigista ee hoos-u-dhaca ayaa lagu kori karaa hadhka dhirta oo sarreeya.
Geedaha waa in ay leeyihiin nidaam xidid ku haboon. Ugu horreyntii, sababtoo ah baaxad-darrada baahsan ee ballaaran iyo qoto-dheer ee qaybta jaqidda. Waxaa soo baxday in nidaamka xididka waa in lagu dhejiyaa qashinka kala duwan ee qoto dheer, sidaa darteed ma jirto tartan cunto iyo biyo.
Geedaha waa in ay leeyihiin qiyaas ahaan isla shuruudaha dhismaha ciidda, bacriminta iyo kiimikada..
Waxaa jira shuruudo loogu talagalay dhirta dhirta. Cayayaanka iyo cudurrada, quudinta iyo waraabinta, waxaa sidoo kale jira fikradda gargaarka isdhexgalka ee dhirta. Isku-dhafidku wuxuu dhacaa is-beddelka dheecaanka xididka iyo is-dhaafsiga phytoncides.
Waxaa soo baxday in is-waafajintu ay tahay fikrad adag. Waxaa jira nidaamyo fudud oo la xidhiidha isdhexgalka dhirta, kuwaas oo la sameeyey sababo la xiriira aragti dheer ee bannaanka iyo Fiisooyinka.
Way fiicantahay in la beero raspberries meel u dhow dabacsan ama geedka tufaaxa, iyo kabaha casaanka ee geesaha beerta leh baradho. Waxaad ka tegi kartaa dufan ka mid ah geedka tufaaxa kaliya adoo xaddidaya nidaamka xididka. Ka mid ah duurka berry iyo geedo tufaax ah, waxaad kala firdhin kartaa afkoda iyo kore ee yaanyada bred, ay urta cayayaanka cayayaanka.
Ma aha hal warshad u dulqaadanaysa xaafadda geedi-geedeedka iyo fennel. Waa in lagu koro meelo kala duwan oo beerta ah. Ma kori kartid strawberries ka dib baradho sababtoo ah nematodes, iyo sidoo kale ka dib kaabajka, qajaarka iyo yaanyada.
Dib u wareegista dhulka
Geedka ciidda waxaa loo abaabulaa qaabka soo socda: waxaa lagama maarmaan ah in ciidda ka soo daadiyo duurka berriga oo ka hooseysa dalagyada bidixda ah, iyo ciidda ka hooseysa kaabajka, basasha iyo bocorka si ay u sameeyaan hoostooda. Under kareemka, basasha iyo bocorka ku daray compost.
Markaad ka shaqeyneyso aqalka dhirta lagu koriyo, wax walba waa sahlan tahay. Halka, ka yar ubaxyada, ciidda waxaa laga soo qaaday yaanyada hoostiisa by lakabka ah 15 cm iyo lakabka isku mid ah ee compost dhirta si fiican waa la isticmaalaa. Waxay ku jirtaa xilliga cusub si ay u koraan qajaarka. Tamaandhada waxay u gudbi doonaan meesha qajaarka, taas oo dhammaan xagaaga ay lagama maarmaan tahay in la dhajiyo organis cagaaran. Haraaga haraaga ah waxay noqon doonaan dhar sare oo tamaandheyn ah, waana in lagu sifeeyaa sariirta halkii qajaarka.
Dhaqdhaqaaqa noocan oo kale ah ee carrada waxaa la sameeyaa hal mar 3 ilaa 4 sano. Waqtigaan wuxuu noqon doonaa mid ku filan sanadkiiba inuu bedelo meesha qajaarka iyo yaanyada. Dalagyada cagaaran ayaa si fiican ugu koray qaabka shaabadaha ee qaybta dalagyada muhiimka ah, xitaa gudaha lagu koriyo, xitaa sariiraha.
Xaqiiqdu waxay tahay in intooda badani ay awood u leeyihiin in ay kufsadaan tiro badan oo cayayaanka ah oo aan keligood aheyn, laakiin sidoo kale deriskooda beerta iyaga oo leh phytoncides.